Jahawareer Maamul Oo Ka Taagan Wasaaradda Warfaafinta Somaliland | Gabiley News Online
Hargeysa (Hargeisa Press.com ): Jahawareer culus oo dhinaca Maamulka ah ayaa Maalmahan u dambeeyay ka taagan Wasaaradda Warfaafinta Somaliland kaasi oo sababay inay gabi ahaanba istaag gasho shaqo maalmeedkii iyo hawl socodsiintii Wasaaradda Warfaafinta Somaliland.
Waxa gabi ahaanba hawada ka maqan Idaacadii waynayd ee Gobolaladda Dalka iyo goobo badan gaadhi jirtay ee RADIO Hargaysa.
Waxaanay idaacadda hadda baxdaa ku kooban tahay oo qudha Caasimadda Hargeysa taasi oo uu tahli kari waayay inuu dayactiro wasiirka hadda Wasaaradda horjoogaha ka ahi Maxamed Muuse Diiriye oo ah masuulkii ugu liitay ee Wasaaraddaasi soo maray intii ay jirtay.
Taasoo ciidankeenii qaranka ee Furinta joogay oo Idaacaddani maaweelo u ahayd, hadda dhagaystaan muddo afar bilood ku dhawba Idaacadda Cadawga ee GAROWE ka baxda ee afka Maamulka Puntland ku hadasha, arintaasi oo niyad jab ku diray Ciidanka Qaranka oo walaac gaar ah ay arintani ku abuurtay.
Sidoo kale waxa isna muddo afar bilood ku dhaw fadhiya Tv-gii qaranka gaar ahaan qaybtii gudaha “Local-ka”, ahayd kaasi oo u fadhiya farsamo Xumo iyo Maamul Xumo ragaadisay Wasaaradda Warfaafinta Wakhtigan.
Ma jirto xiitaa wax dadaal ah oo fadeexadahan iyo idaacadahan xidhan lagu hagaajiinayaa, waxaanay Wasaaradda Warfaaftintu wakhtigan Hoy u noqotay Masuuliyiin aan ehel u ahayn shaqada Wasaaradda oo ka fikiraya oo qudha lacag halkii ay ka heli lahaayeen.
Ceeb weyn ayay ku tahay Wasiir Maxamed Muuse Diiriye inuu sii dhex joogo madaama oo labadii Idaacadood ee Halbawlaha u ahaa dalkani ay ku dul Xidhmeen. Waxa Lagu tilmaamaa inuu yahay masuul aan wax qorshe maamul lahayn keli ah inuu iska dhex joog joogo shaqada mooyee.
Wasiirka Maxamed Muuse Diiriye, Ku Xigeenkiisa iyo Agaasimaha guud ee Wasaaraddaasi ayaa madaxa iskula jira oo isla jaan qaadi la’a.
Sida ay noo xaqiijiyeen Shaqaalaha Wasaaraddu, waxa ay wasaaraddu kujirtaa Xaaladii Ugu adkayd, waxa la cunay oo ay afka iska mariyeen lacagtii 18-May ee Warbaahinta loo qorsheeyay Doorkii dhawayd.
Waxa kaloo iyagana la cunay oo ay isku qab qabsadeen masuuliyiinta Wasaaradda ugu sareeyaa lacagaha u qoondaysan Barnaamijyadda ay maalgaliyaan Shirkadaha Isgaadhsiinta Telesom iyo Somtel.
Lacagtaasi oo ah mid buuran oo haddii la iskula xisaabtamo wax ka tari lahayd duruufaha dhaqaale xumo ee wasaaradda lasoo darsay, lacagtaasi oo aan waxba laga siin Shaqaalaha Wasaaradda, isla markaan buuq iyo kalsooni daro ku abuurtay shaqaalihii Wasaaradda Warfaafinta.
Wasiirka wasaaradda Warfaafinta Maxamed Muuse Diiriye oo ah masuulka ugu sareeya Wasaaradda ayaan wax qorshe ah illaa hadda la iman, waxaanay Wasaaraddu hoy u noqotay Maamul Xumo iyo isku dhexyaac dhinaca shaqada ah.
Arimaha ugu layaabka badan waxaa ka mid ah, iyadoo wasaaraddu xaaladaasi ku jirto, ayaa haddana waxa ay qorteen shaqaale kale iyo lataliyayaal qaab qabiil lagu qoray, waxaanay arintaasi niyadjab ku riday guud ahaana hawl wadeenadii hore u sii joogay Wasaaradda.
Wasiirka ku xigeenka Wasaaraddaasi Naasir Cumar Yare ayaa isna Khilaaf awgii looga soo badelay Wasaaradda Caafimaadka kadib markii uu shaqaale badan si aan qarsoodi ahayn oo beeshoodda ah u qortay.
Hadda-na Wasaaradda Warfaafinta ka bilaabay hawl kale oo taasi uun la mid ah. wasiirka wasaaradda Warfaafinta oo aan isna dhaamin ayay muddadan ay imika wasaaradda wada joogaan ay isku dawakheen, waxaanu mid waliba raadinayaa meel lacag leh ama dhaqaale kasoo galo.
Waxay wasaaraddii Warfaafintu ku jirtaa xaalad adag oo xagga maamulka ah, waxaanay shaqaalihii ka hawlgalayay ku kaliftay inaanay shaqadaba iman niyad jab ay ka qaadeen awgeed.
Madaxweyne Biixi ayaa laga dhursugayaa inuu talaabo ku haboon ka qaato xaaladda ka taagan Wasaaradda oo aan ka qarsoonayn, dhawr jeerna la gaadhsiiyay muruga iyo ismarin waagga wasaaradda ka taagan.